Transportation: ပင်လယ်အားဖြင့်လေယာဉ်ဖြင့်, ရထားနှင့်အမြန်ပေးပို့သည်။
ငွေပေးချေမှုရမည့်: L ကို A / C, T / T, Western Union, Paypal
ဆိပ်ကမ်း: ရှန်ဟိုင်း / Tianjin / Qingdao
China Factory FRP(Fiberglass) Pultrusion သေ Wavy Tile Type Mould
The Overview : Mold is an important tool for pultrusion technology, generally consisting of two parts: preforming die and forming die. 1. Pre-forming mold In the pultrusion process, after the reinforcing material is impregnated with the resin (or while being impregnated), before entering the forming mold, it must pass throughapre-forming mold composed ofaset of yarn guiding elements. The role of the pre-forming mold is The reinforced material after dipping is gradually formed intoapreform havingashape andasize corresponding to the shape of the cavity according to the profile configuration of the profile, and then enters the molding die, thereby ensuring uniform yarn content in the section of the product. 2. The ratio of the cross-sectional area of the molding die to the cross-sectional area of the product should generally be greater than or equal to 10 to ensure that the mold has sufficient strength and rigidity, and the heat distribution is uniform and stable after heating. The length of the pultrusion die is determined according to the pulling speed during the molding process and the curing speed of the resin gel to ensure the degree of mold release curing when the product is pulled out. Generally, steel is chrome-plated, and the surface of the cavity is required to be smooth and wear-resistant, thereby reducing the frictional resistance of the pultrusion and increasing the service life of the mold. မှိုချမှတ်ခြင်း, အဆင့်မြင့် Forge ရဲ့လုပ်ငန်းစဉ်နှင့်ထိရောက်သောအပူကုသမှုများအတွက်အရည်အသွေးမြင့်သံမဏိ။ ဒါဟာဒဏ်ငွေကြိတ်နှင့်စူပါ electrostatic တိချော၏ CNC ခြင်း simulation များအတွက်အစွမ်းထက်အာမခံချက်ပေးပါသည်။ အဆိုပါမျက်နှာပြင်ချထားတဲ့ခက်ခဲမှာ chrome သည်မှို၏ခိုင်မာသော HRC58-62 ရောက်ရှိဖို့ရန်လုံလောက်သောကြောင်းကိုဒါ, အတွင်းလိုင် finish ကို 0,0025 ဖြစ်ပါသည်, နှင့်ဖြောင့် 0,0025 ဖြစ်ပါတယ်။ မှိုသံမဏိ၏ပြည်တွင်းရေးဝါကျဖွဲ့စည်းပုံခိုင်မာသောယူနီဖောင်းဖြစ်ပါသည်, သိပ်သည်းဖြစ်ပြီး, ပစ္စည်းတည်ငြိမ်ဖြစ်ပါတယ်။ အကြီးတန်းပရော်ဖက်ရှင်နယ်မှိုထုတ်လုပ်သူအဖြစ်ကျနော်တို့ပစ္စည်းများ၏အရည်အသွေးနှင့်တည်ငြိမ်ရေးမှိုကုန်ထုတ်လုပ်မှုများအတွက်အရေးကြီးသောကြောင်းကိုငါသိ၏။ ဒီနေ့ရဲ့အလွန်အမင်းယှဉ်ပြိုင်စျေးကွက်မှာတော့ဖောက်သည်အချို့အလွန်စျေးပေါသောမှိုမဝယ်နိုင်လျှင်ပင်ရှိအပြောင်းအလဲနဲ့နှင့်ထုတ်လုပ်မှုအတွက်ပြဿနာတွေဖြစ်လိမ့်မည်ကို၎င်း, ဆုံးရှုံးခဲ့ရအပြောင်းအလဲနဲ့ကုန်ကျစရိတ်နှင့်အချိန်ဝေးမှိုသူ့ဟာသူ၏တန်ဖိုးကျော်လွန်ပါလိမ့်မယ်။ ထိုကွောငျ့, တစ်ဦးတည်ငြိမ်ပြီးဂုဏ်သိက္ခာရှိတဲ့မှိုကုန်ပစ္စည်းပေးသွင်းသည့် pultruded ပရိုဖိုင်းကိုထုတ်လုပ်သူရန်အလွန်အရေးကြီးပါသည်။
1. အမြင့်ခိုငျမာရှည်လျားဝန်ဆောင်မှုဘဝနှင့်မြင့်မားသောမျက်နှာပြင် finish ကို, ထုတ်ကုန်လိုအပ်ချက်များတွေ့ဆုံ; 2. The material is made of high quality die steel, after nitriding or hard chrome plating and polishing; 3. ထိုလှည့်လည်ပြွန်မှိုနက်ရှိုင်းသောအပေါက်အပြောင်းအလဲနဲ့နည်းပညာနှင့်နောက်ဆုံးတော့မှာ chrome ချမှတ်နှင့်မှိုကုန်ထုတ်လုပ်မှုများအတွက်အသုံးပြုသောအရည်အသွေးမြင့်သံမဏိ polishes, အဆင့်မြင့် electroplating ဖြစ်စဉ်ကိုချမှတ်နှင့်အကျိုးရှိစွာအပူကုသမှုကိုလုပ်ဆောင်တယ်။ ဒါဟာဒဏ်ငွေကြိတ်နှင့်စူပါ electrostatic တိချော၏ CNC ခြင်း simulation များအတွက်အစွမ်းထက်အာမခံချက်ပေးပါသည်။ မျက်နှာပြင်ကတော့မှို၏ခိုင်မာသော Rockwell 58-62 ရောက်ရှိဖို့ရန်လုံလောက်သောကြောင်းဒါကြောင့်ခက်ခဲမှာ chrome, ချထားတဲ့, အတွင်းပိုင်းလိုင် finish ကို 0,0025 ဖြစ်ပါသည်, ထိုဖြောင့် 0,0025 ဖြစ်ပါတယ်။ မှိုသံမဏိ၏ပြည်တွင်းရေးဝါကျဖွဲ့စည်းပုံခိုင်မာသောယူနီဖောင်းဖြစ်ပါသည်, သိပ်သည်းဖြစ်ပြီး, ပစ္စည်းတည်ငြိမ်ဖြစ်ပါတယ်။
ယင်း၏တည်ထောင်ကတည်းကကုမ္ပဏီ FRP မှိုထုတ်လုပ်မှုနှင့် FRP ပရိုဖိုင်းကိုအပြောင်းအလဲနဲ့အတွက်စဉ်ဆက်မပြတ်ထိုးဖောက်ဖန်ဆင်းတော်မူပြီ။ 1995 ခုနှစ်တွင်ကုမ္ပဏီထူထောင်နှင့်ကုမ္ပဏီအောင်မြင်စွာ FRP pultrusion မှိုများအတွက်ပြည့်စုံဒီဇိုင်းအစီအစဉ်ကိုဖွံ့ဖြိုးပြီးနှင့်အစုလိုက်အပြုံလိုက်ထုတ်လုပ်မှုရယူခဲ့ခဲ့သည်။ In 2005, it was an excellent supplier of phenolic pultrusion and epoxy pultrusion, and vinyl pultrusion in mold design and mold material application. 2014 ခုနှစ်တွင်သူသည် FRP anode ပြွန် pultrusion မှိုနှင့်အစုလိုက်အပြုံလိုက်ထုတ်လုပ်မှု၏ဒီဇိုင်းနှင့်ဖွံ့ဖြိုးရေးပါဝင်ခဲ့။ 2015 ခုနှစ်တွင်ကျနော်တို့ polyurethane pultrusion မှိုဖွံ့ဖြိုးပြီးနှင့်စသည်တို့ကိုပြတင်းပေါက်ပစ္စည်းများ, တံတားများအတွက်ထိုးဖောက် လုပ်. , ကျနော်တို့ polyurethane pultrusion မှိုနှင့်လုပ်ငန်းစဉ်များတွင်အများအပြားကုမ္ပဏီများနှင့်နက်ရှိုင်းသောပူးပေါင်းဆောင်ရွက်မှုရှိသည်။ နှစ်ပေါင်း 20 ကျော်အဘို့, Jinglong, FRP မှို၏သုတေသနနှင့်တီထွင်ဆန်းသစ်မှုမှကျူးလွန်ရာထူးတိုးနှင့်တရုတ်နိုင်ငံများတွင်ပေါင်းစပ်ပစ္စည်းများ၏ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှုမျက်မြင်, ဤလယ်ပြင်၌ထူးခြားသောအားသာချက်နဲ့ပရော်ဖက်ရှင်နယ်ကုန်ပစ္စည်းပေးသွင်းဖြစ်လာသည်ခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။
လက်ရှိတွင်ကုမ္ပဏီ FRP pultruded profile များကို, FRP လှေကား / ထိုင်ခုံလုပ်ဖို့, ကင်, FRP ခြံစည်းရိုး, FRP သော့ခလောက်နှင့်အခြားထုတ်ကုန်များထုတ်လုပ်မှုအပါအဝင်စျေးကွက်များအတွက် profile များကိုများစွာရှိပါတယ်။ အဆိုပါကုမ္ပဏီတစ်ခုက high-quality စွမ်းရည်အဖွဲ့ပရော်ဖက်ရှင်နယ်ထုတ်လုပ်မှုနှင့်နည်းပညာပိုင်းပုဂ္ဂိုလ်များ, ပရော်ဖက်ရှင်နယ်စျေးကွက်ရှာဖွေရေးအဖွဲ့က, အရည်အသွေး pre-အရောင်းနှင့်ရောင်းချပြီးနောက်ပိုင်းဝန်ဆောင်မှုအဖွဲ့ရှိပါတယ်။ Self-ပိုင်ဆိုင်သောအခွက်နှင့်နည်းပညာများ၏ပြည့်စုံသောအားသာချက်များလက်အောက်တွင်ထုတ်လုပ်ထုတ်ကုန်စွမ်းဆောင်ရည်အတွက်တည်ငြိမ်ပြီးအရည်အသွေးယုံကြည်စိတ်ချရသောဖြစ်ကြသည်။ တစ်ချိန်တည်းမှာပင်, သူတို့ကမြင့်မားသူတို့ရဲ့စိတ်အားထက်သန်မှုကိုဆောင်ရွက်ရာဘို့စားသုံးသူများကချီးကျူးထောပနာနေကြပါတယ်။ Xinxiang Jinglong Composite ပစ္စည်းများ Co. , Ltd ထုတ်ကုန်ဖွံ့ဖြိုးရေး, ဒီဇိုင်း, ထုတ်လုပ်မှု, အရောင်းနှင့် installation ကိုပေါင်းစပ်နေတဲ့ကုမ္ပဏီတစ်ခုဖြစ်ပါသည်။ ကျွန်ုပ်တို့၏ကုမ္ပဏီအဆင့်မြင့်နည်းပညာ, အရည်အသွေးမြင့်ထုတ်ကုန်များ, ကျိုးကြောင်းဆီလျော်သောစျေးနှုန်းနှင့်ပြီးပြည့်စုံသောဝန်ဆောင်မှုနှင့်အတူထက်မြက်ကိုဖန်တီးရန်တရုတ်နှင့်နိုင်ငံခြားမိတ်ဆွေတွေနဲ့အတူပူးပေါင်းဆောင်ရွက်ရန်ဆန္ဒရှိသည်။
ယခင်: Good Quality FRP(Fiberglass) Large Round Tube Pultrusion Mould
နောက်တစ်ခု: Factory Selling FRP(Fiberglass) Pultrusion Die I-shaped Mould
ဖိုင်ဘာဖန် Pultrusion သေ
ဖန်မျှင်ထည် Pultrusion သေ
Factory Selling FRP(Fiberglass) Pultrusion Roun...
SMC မှိုသေ, Machince ဖွဲ့စည်းခြင်း Bolt က, shaped Flat Profiles, Frp ပုံသွင်းက Round Tube, Fiberglass Rectangular Tube, Frp Pultrusion သေ,